Ardayda Archives »Jaamacadda Hodges
Waxaan Ku Faannaa Inaan Soo Bandhigno Kalkaaliyayaasheena 2019!
Hambalyo Kalkaaliyayaasheena 2019! 10-kii Maajo, 2019, Jaamacadda Hodges waxay ku faaneysay martigelinta Munaasabadda Pinning ee loogu talagalay kalkaaliyeyaasha qalin-jabinaya sanadkan. Maxay tahay qaab qurux badan oo loogu dabaaldego Toddobaadka Kalkaaliyeyaasha! Xafladayada Bixinta ayaa ah waqti qaas u ah kalkaaliyayaashayada kal-fadhiga 2019 wuxuu ahaa dhacdo kale oo gaar ah. Kalkaaliye caafimaad kasta si adag ayey u shaqeysay si ay u gaarto [...]	Read More
Hambalyo Ardayda EMS
Ardayda Hodges EMS waxay qaateen kaalinta 1aad! Ardayda ka socota barnaamijka Adeegyada Caafimaadka Degdegga ah ee Jaamacadda Hodges waxay ku tartameen sanadkii lixaad ee Panther EMS Challenge ee Lake Worth, FLA dhammaadkii wiigga. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Palm Beach State College. Kooxo ka kala yimid daafaha gobolka ayaa lagu xukumay xaalado kala duwan oo deg-deg ah. 18-ka koox ee [...]	Read More
Ogaanshaha Kadibna Waxay Taqaanay Hada
Ogaanshaha Kadib Waxay Taqaanay Hada - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul Muddo dheer kahor Martha "Dotty" Faul waxay iska qortay Jaamacada Hodges, waxay kudhowaad 20 sano ku qaadatay dhisida xirfad ku saabsan sharci fulinta labada xafiis ee DeSoto County Sheriff iyo Charlotte County Sheriff's Office. Laga soo bilaabo shaqada ilaalada waddooyinka oo ah ku-xigeen shariif illaa maaraynta baaritaannada dambiyada [...]	Read More
Ku riixida Xuduudaha
Ku Riixida Xaddidaadaha - Steffanny Golding Perseveres Above All Fisistist physist iyo farmashiyaha Marie Curie mar ay tiri, “Noloshu uma sahlana midkeenna. Laakiin taa maxaa ka jira? Waa inaan yeelanaa adkaysi iyo, wax walba, kalsoonida nafteenna. Waa inaan aaminsanahay inaan hibo u leenahay wax, iyo in sheygan, qiimo kasta ha lahaadee, [...]	Read More
Barashada Hogaaminta Heer Kasta
Sidee One Hodges Certified Firefighter u Bartay Hogaaminta Weligaa ma ku dhawaaqday ereyada, "Ma jiraan saacado ku filan maalintii" markaad fiiriso kalandarkaaga? Saacad kastaa waxay leedahay hawl ama waajibaad ka geddisan, haddii aad nasiib leedahayna, saacado kooban ayaa hurdo u heellan. Way fududaan lahayd in loo qaato in [...]	Read More
Lix farsamood oo lagu guuleysto Carwada Xirfadeed
Lix Farsamooyin ah in lagu guuleysto Carwada Xirfadeed Waxaa qoray Jama Thurman, Maamulaha La-talinta iyo Adeegyada Xirfadda Ku lugaynta carwada xirfadeed wuxuu umuuqdaa hawl culus. Waxaad ka mid noqon kartaa musharixiin badan oo u tartamaya dareenka loo shaqeeyaha, laakiin waxaad ka faa'iideysan kartaa dadka kale adoo raacaya tilmaamahan shaqada [...]	Read More
Nolol Fariimo ah
Nolosha Koowaad Sida mid ka mid ah ardayda halyeeyada ahi ugu guuleystey himilooyinkiisa isagoo u soo maraya Nolosha Firsts. Haddii Edward Davis uu dooran lahaa hal erey oo uu isagu tilmaamo, waa la “wadi lahaa” Laga soo bilaabo noloshii milatariga, inuu noqdo jiilkii koowaad ee jaamacadda ka qalin jebiyey oo sii waday waxbarashadiisii ​​waxbarasho ee barnaamijka sayidkiisa, si uu u maareeyo kiisa [...]	Read More